WordPress: Tinye Ozi edemede na Sidebar | Martech Zone
Mmelite: M mepụtara Ngwaọrụ Sidebar iji gosipụta Ozi Chepụtara gị.
Akwụkwọ nke Jon Arnold dere taa dị mma na ndụmọdụ maka ịwepụta weebụsaịtị, mana achọpụtara m na okwu izizi nyere m post ahụ. Nke ahụ bụ akara ngosi na m ga-eme ka onye ode akwụkwọ mara ọkwa.
Emepụtaghị m wijetị maka nke a (ọ na-eju m anya na ọ nweghị onye ọzọ nwere!), Mana enwere m ike idezi akụkụ m n'akụkụ isiokwu WordPress m wee gbakwunye koodu ndị a:
Na otu peeji peeji, agbakwunye mpaghara akụkụ ọzọ nwere foto nke onye edemede (iji a gravatar), aha ha zuru oke, ebe obibi ha na ihe omuma ha dika akowara ha na profaịlụ ha. M kwukwara a di na nwunye na klas aka huu gravatar floated n'aka ekpe na elu nke ngalaba nwere a kacha nta dị elu na ihe omume na-ede akwụkwọ enweghị ihe ọmụma.
Nweta_author_meta('email') weghachite adreesị ozi-e nke onye edemede ma nyefee ya ọrụ get_avatar. Na Nwachukwu arụ ọrụ na-atụgharị email ahụ na njirimara nke nyefere na sava gravatar ka ọ biputere onyonyo kwesịrị ekwesị. Nke a dị mkpa ebe ọ bụ na ịchọrọ izere ime ka adreesị ozi-e dị na isi iyi nke ibe… spammers hụrụ iwe ihe ubi email.
A na-ewepụta data ndị ọzọ na-eji ya the_author_meta ozi.
Tags: njirimaraVidio Ahịankiriwordpress cse
Jul 24, 2009 na 12:33 PM
Ọ bụghị ihe magburu onwe ya inwe ike inwe echiche ma mejuputa ya ozugbo? Nke ahụ ga - ekwe omume n'ihi Nnwere Onwe Otu (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) - "Nnwere onwe ịmụ otú mmemme ahụ si arụ ọrụ, ma gbanwee ya ka ọ mee ihe ị chọrọ."
Jul 24, 2009 na 11:58 PM
Achọpụtara m na onye na-agụ RSS m ka depụtara gị dị ka onye edemede maka ọkwa ọ bụla. Ohere obula nke imegharia ya ka o gosi aha onye dere ya?
Jul 25, 2009 na 12: 10 AM
Daalụ maka igosi ihe ahụ, Ade! Nke ahụ bụ ọnọdụ Feedburner iji mee ka ndepụta nri dakọtara na iTunes (nke m achọghị!). N'ụzọ na-akpali mmasị, ịgbakwunye onye edemede ahụ na ndepụta ahụ nwere ike ịchọ mmepe ụfọdụ!
Jul 25, 2009 na 9:49 PM
Naanị wepụtara: 1.0.0dị XNUMX nke WordPress Sidebar Widget!
Aug 12, 2009 na 12:13 PM
You bu n'obi iji kwado ya na wordpress.org ka anyị nwee ike nweta mmelite?
na dị ka ajụjụ seconde: ọ bụrụ na m chọrọ igosipụta eg AIM naanị mgbe ejuputara ya, enwere m ike iji otu kọmpụta iji mee nke ahụ ma ọ bụ nke ga-eweta dị ka nke a: "AIM:" Achọrọ m ka ọ gosipụta ihe ọ bụla Mmepụta bụ ihe efu…
Eleghị anya m ga-agbanwe ngwa mgbakwunye gị maka ibe m iji gosipụta bio na obere ozi: kọntaktị dị ka icq, aim, xfire na na.
Aug 21, 2009 na 1:48 PM
Kedu echiche dị oke egwu wijetị gị na-agbakwunye gravatar sidebar. (Aghaghị m ikwupụta na amaghị m okwu gravatar, rue mgbe m sooro njikọ gị iji chọpụta - ekele). Aga m etinye wijetị gị na saịtị nke m.
BTW, ọtụtụ ozi dị ukwuu na saịtị gị, obi dị m ezigbo ụtọ na achọtara m ya.